Tilmaamaha Qiimaha Qadaadiic: Tufaax u gaar ah Ubuntu oo ina tusaysa qiimaha dhirta bitcoin iyo kuwa kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Laga soo bilaabo Linux
Iyadoo kor u kacsan ee qiimaha Seeraar iyo waxyaabo badan oo loo yaqaan 'cryptocurrencies', in ka badan hal ayaa bilaabay inuu aqbalo qaabkan lacag bixinta si joogto ah, laakiin sidoo kale dhowr qof ayaa lacagtooda ku keydsada kuwa kalena way shaqeeyaan «ganacsiga bitcoin«, Badiyaa tan dambe si weyn ayaa looga faa'iideysan doonaa Qiimo jaban, Tufaax loogu talagalay Ubuntu oo ina tusaysa qiimaha hadda ee bitcoin iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
1 Waa maxay Coinprice?
2 Sida loo rakibo Tilmaamaha Qiimaha Sicirka ee Ubuntu iyo derivatives
Waa maxay Coinprice?
Coinprice waa tufaax furan oo laga helo Ubuntu iyo noocyo kala duwan, oo ay soo saareen Nil gradisnik adoo adeegsanaya Python, taasi waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan ku aragno qiimaha dhabta ah ee Bitcoin iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies' si deg deg ah oo fudud.
Si la mid ah, aaladdu waxay leedahay beddel ka Bitcoin oo u beddela Dollar iyo Euro, waxay kaloo na siisaa tirakoobka heerka ugu sarreeya, ugu hooseeya iyo celceliska ee 24-kii saac ee la soo dhaafay, taas oo ka dhigaysa aalad aad u xiiso badan kuwa u baahan kormeerka iyo xakamee isbedbeddelka lacagahaas.
Muuqaalka tufaaxani waa mid fudud, oo leh codad madow iyo menu si fiican loo qaabeeyey, iyo sidoo kale dhowr ikhtiyaar oo dheeri ah.
Sida loo rakibo Tilmaamaha Qiimaha Sicirka ee Ubuntu iyo derivatives
Rakibaadda qalabkani waa mid fudud, waa inaan kaliya buuxinno shuruudda ah inay noqoto disto ku saleysan Ubuntu 13.10 ama ka sareysa sidoo kalena lagu rakibay python3.
Marka xigta, waa inaan fulinno amarradan soo socda si aan u jajabino, u ururinno oo aan u socodsiino Coinprice:
Tilmaamahan fudud waxaan ku raaxeysan karnaa tufaaxan wax ku oolka ah ee nagala socodsiin doona qiimaha bitcoin iyo waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Soosaaraheedu wuxuu u furan yahay inuu sii wado hagaajinta qalabka, markaa haddii aad rabto inaad la xiriirto, waad ka sameyn kartaa sidaas halkan
Dhinaceyga waxaan ku tijaabiyay tufaaxa gudaha Linux Mint 18.2 "Sonya" oo leh KDE Waxayna si fiican iigu shaqeysaa aniga, hadda si aan u helo waddo aan ku billaabo abuurista dhirta iyo sii wadista sharadka tikniyoolajiyada xilligan iyo mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Tilmaamaha Qiimaha Qadaadiic: Tufaax u gaar ah Ubuntu oo ina tusaysa qiimaha Seeraar iyo kuwa kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'
daadi 713 dijo
Waan isticmaalaa https://github.com/OttoAllmendinger/gnome-shell-bitcoin-markets
kaas oo suubban laakiin si fiican u shaqeeya
Sida loo sameeyo Ushahidi server si loo duubo loona ilaaliyo dambiyada dowlada Venezuela